Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Air Astana dia mahazo ny fiaramanidina Airbus A321LR vaovao fahenina
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Kazakhstan • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fiaramanidina Airbus A321LR dia miasa manerana ny tamba-jotra iraisam-pirenen'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, misy toeran-kaleha toa an'i Dubai, Frankfurt, London (nanomboka ny septambra 2021), Istanbul, Sharm el-Sheikh (Egypt) ary Podgorica (Montenegro).
Ny fiaramanidina Airbus A321LR iray manontolo an'ny Air Astana dia nampanofaina avy amin'ny Air Lease Corporation.
Ny Airbus A321LR dia manana maotera Pratt & Whitney ho an'ny taranaka farany.
Ny fiaramanidina Airbus A321LR dia miasa manerana ny tamba-jotra iraisam-pirenen'i Air Astana.
Ny Airbus A321LR vaovao fahenina an'ny Air Astana dia tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Nur- Sultan mivantana avy amin'ny orinasa Airbus any Hamburg, Alemana androany. Ny fiaramanidina Airbus A321LR iray manontolo dia nampanofaina avy amin'ny Air Lease Corporation, miaraka amin'ny fiaramanidina voalohany tonga tamin'ny volana septambra 2019 ary ny iray amin'ireo karazana dia tokony halefa alohan'ny faran'ny 2021.
The Airbus A321LR dia miaraka amin'ny motera Pratt & Whitney farany, izay mampihena ny fandaniana solika hatramin'ny 20%, 5% ny vidin'ny fikolokoloana, 20% ny haavon'ny gazy ary 50% ny tabataba raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina taloha. Ny kabine dia namboarina miaraka amin'ny seza fisaka 16 amin'ny sokajy Business sy seza 150 amin'ny kilasy Economy, miaraka amin'ny seza rehetra misy efijery tsirairay.
Ny fiaramanidina Airbus A321LR dia miasa manerana ny tamba-jotra iraisam-pirenen'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka miaraka amin'i Dubai, Frankfurt, London (nanomboka ny septambra 2021), Istanbul, Sharm el-Sheikh (Egypt) ary Podgorica (Montenegro).
The Air Astana vondrona dia miasa amina fiaramanidina miisa 35 misy 15 Airbus A320 / A320neo, 12 Airbus A321 / A321neo / A321LR, telo Boeing 767 ary dimy Embraer E190-E2, miaraka amina totalin'ny sivy A320 sy A320 neo iray misy fizarana LCC, FlyArystan. Ny salanisan'ny sambo fiaramanidina Air Astana dia telo taona monja, ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo faralahy indrindra eto an-tany.